Semalt: Mandefa mozika amin'ny Gmail
Rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mampiasa ny kaonty Gmail amin'ny fisoratana anarana sy tambajotra sosialy toy ny Dropbox, Facebook, Twitter, ary LinkedIn, dia mety ho tondraky ny hafatra tsy fantany na ny mailaka imailaka ny fidinao. Ny dingana manaraka novokarin'i Alexander Peresunko, Semalt Customer Success Manager, dia hampianatra anao ny fomba hanakanana ireo sendika ao amin'ny Gmail ary hanapariaka ny mailaka na hafatra nalefan'izy ireo raha tsy nahasosotra azy ireo.
Atsaharo ny mpandefa ao amin'ny Gmail:
Mba hampidirana hafatra an-tsokosoko na ahiahiana ho an'ny lisitry ny hafatra voasakana, dia azonao atao ny manova azy ireo any amin'ny lahatahinao spam.
Sokafy ny hafatra avy amin'ilay mpandefa izay nanapa-kevitra ny hitazona;
Tsindrio ny bokotra misimisy kokoa ary tadiavo ny telozoro (▾) eo akaikin'ny bokotra Fanontanao ao amin'ny sehatry ny lohatenin'ny hafatra;
Fidio ny anarana "Block" avy amin'ny menuo izay vao niseho;
Tsindrio eo amin'ny bokotra Block eo ambanin'ny faritra Block This Sender,
Ho an'ny mpanolotra sasantsasany, ity sakafo ity dia mety tsy mandeha araka ny tokony ho izy, noho izany dia azonao ampiasaina tsotra izao ny fitsipiky ny Block Sender mba hampitsaharana ny hafatra avy amin'ny fahatongavanao ny votoatin'ny Gmail..
Hamafa ny mpandefa ao amin'ny Gmail:
Raha tsapanao fa nanakana ny mpandefa iray ianao ary te hahazo ny alahelony amin'ny ho avy, dia azonao atao ny manala ny ID avy ao amin'ny lisitra voasakana ary manomboka mandefa hafatra. Amin'ity tranga ity, ny hafatra na mailaka amin'ity mpandefa ity dia tsy halefa amin'ny ordinateranao Spam.
Sokafy ny faritra misy ilay mpandefa ary tsindrio ny bokotra More ( ▼ ) ao amin'ny fizarana header;
Ny dingana manaraka dia ny fisafidianana ny "Unblock" ny anaranao avy amin'ny sakafo izay vao niseho;
Tsindrio eo amin'ny bokotra Unblock, ary hanala ny mpandefa avy hatrany ianao;
Raha toa ka tsy manana hafatra avy amin'ilay mpandefa ianao dia tokony hanaraka ireto dingana ireto:
Tsindrio ny safidy Settings (⚙) ao amin'ny kaontinao Gmail;
Fidio ny bokotra fanovozana avy ao amin'ny menok 'ny ambony ary mandehana any amin'ny sokajy Fidirana sy Block
Tokony ho azonao antoka fa efa najanonao ny mpandefa anao hikendrena na hibahana
Tsindrio eo amin'ny bokotra Unblock, ary hanala azy avy hatrany ianao;
Atsaharo ny Sender amin'ny alalan'ny fitsipika Gmail manokana:
Azonao atao ny manakana ny senders amin'ny fampiasana fitsipika Gmail manokana, izay voalaza etsy ambany:
Tsindrio ny bokotra Show ( ▼ ) ao amin'ny kaontinao Gmail;
Tadiavo ny ID ny faniriana tianao ary esory ny lisitry ny mpanolotra na ny sehatra rehetra ary manomboka mahazo mailaka ho avy;
Tokony atao tsindry amin'ny bokotra Hanamboatra ity karoka ity ary ataovy azo antoka fa efa nofafanao izany
Ao amin'ny Gmail, ianao dia tsy mila mamafa ireo hafatra na manakana ny senders amin'ny tanana. Amin'ny alalan'ny filalaovana tsotra, ny kaonty Gmail anao dia handefa ny mailaka rehetra avy amin'ny mpanolotra manelingelina ao amin'ny ordinateran'ny Trash na Spam. Amin'ny fomba hafa, azontsika atao ny mamantatra ny hafatra ary manamboatra azy io miaraka amin'ny marika, mba tsy hanakana antsika tsy hanao zavatra hafa. Manoro hevitra anao hamandrika ny lahatahinao Spam ianao amin'ny fitaterana ny hafatra maloto na malware satria mifandray amin'ny mpampiasa anao noho ny tombony ara-bola ianao ary tsy mandefa hafatra hafahafa aminao mandritra ny tontolo andro Source .